Nafxanyaa Wajjin Jiraachuun Dhumate – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooNafxanyaa Wajjin Jiraachuun Dhumate
Nafxanyaa Wajjin Jiraachuun Dhumate!
Damee Boruu: Adooleessa 3, 2020
An equestrian statue of Ras Makonnen is demolished by demonstrators. The beginning of the fall of the Ethiopian Empire – source DW
Nafxanyaan sirna saamnsaa, cunqursaa fi ajjechaa Minilkiin jaarraa tokko dura jalqabee amma har’a uummata Impaayeera Itoophiyaa keessa jiru hudhee qabee jiru dha. Sirni kana Uummata Amharaa wajjin wal qabsiisuun dogongora. Uummatni Amharaa Naannoo Amharaa keessa jiraatu akka uummtoota biraa Impaayeera Itoophiyaa keessa jiraatuu saamama, cunqursamaa fi rakkinaan qabamee uummata jiraatu akka tahe ifa jira.
Sirna nafxanyaa kana kan tiksuu warra qawwee qabatee Minilki wajjin duule lafaa fi qabeenya uummata nannoo Gaafa Afrikaa jiraatan humnaan cabse qabate. Warri kun uummata biyya(indigenous people) buqqisaanii lafa isaanii irraa qubachuudhaan abbaa lafaa fi qabeenya tahanii jiru. Warri abbaa biyyaa isaan tajaajiluu fi isaaniif ergamuu malee lafa isaanii irratti mirga tokko illee hin qaban. Uummatni abbaan biyyaa afaan, aadaa fi seenaa nafxanyaa agugachuu malee kan mataa isaa gudifachuu hin dandeenye.
Uummatni Amharaa sababa afaan isaa afaan motummaa taheef qofa qorqalbiin isaa olaantummaa qaba. Garuu nafxanyoon waan baayyee of jaalatanii fi oftummaa qabanii jechaa Uummataa Amharaaf waan dabarsan tokko illee hin jiru. Naanno biraa caalaa karaa hin baafneef, mana barumsaa fi hospital hin ijaareef. Naannoo Impaayeera Itoophiyaa keessaa naannoon hiyyyumnii fi jireenyi gadadoo itti hammatu tokko Naannoo Amharaa akka tahe wal nama hin falamsiisu.
Nafxanyoonni garuu maqaa Amharaan waan jireenya mataa isaanii tiskacchuu barbaadaniif Amharummaa akka meeshaati itti dhimma bahu. Nafxanyoonni bakka Uummata Amharaa bu’anii dubbachuuf hin danda’an. Akkuma sabaa fi sablammii biraa hojiin isaan farra Uummata Amharaa tahee mul’ata. Uummatni Amharaa akka uummatoota naannoo isaa wajjin nagaan hin jirraane shira itti xaxanii akka nagaa fi jireenyi isaa boora’u gochaa jiru.
Nafxanyoon saba isaan hin saamnee fi hin nyaannee hin jiru. Uummata Amharaa dabalatee. Nafxanyoonni biyyi Itoophiyyaa jedhumtu akka isaaniif qofaa uumatate godhanii fudhatu. Ilmaan nafxannyyaa inni barates tahee kan hin barannee yaadni isaanii tokkuma. Uummata Impaayeera Itoophiyyaa keessa jiraatu kan walitti diree wal ficisiisuu jiru isaan. Ammaan kana caalatti dhumaatii fiduua alaa fi keessa waan isaan wixxifachaa jiran namni hunduu hubachuu qaba.
Biyyaa Itoophiyyaa jedhamtu kanaaf isaan abukaatoo dha. Waan isheen barbaaduu fi tahuu qabduu kan beekuu fi murteessuu qabu nafxannyoota qofa jedhanii yaadu. Uummatni hafne immoo isaan hordofuuf waan isaan nuun jedhan hojjechuuf dirqama qabna. Yoo dide immoo akka dhabamnu nu dorsiisu.
Bara sirni kun Minilkiic dhaabbatee kaase amma yoonaa dhiiga qulqulluu meeqa akka dhangalaasaan lakkoofnee hin fixnu. Manni isaa haa lakkaawwu jennee bira darbuu wayya. Walaalummaa fi gowwummaan obsa irraa adda bahee ilaalamuu qaba. Amma yoona Uummatni Impaayera Itoophiyyaa kan dhumaa jiru waan obsa qabuuf jechuun rakkisaa dha. Waan gowwummaa fi walaalummaa qabnuuf jecha namootni ayyaana ilaallatotaa fi of jaalatoota tahan fedha uummata isaanii gananii waan isaan wajjin dhaabbataniif. Warra Uummata isaanii gane kana dhabamsiisun dirqama uummatichaa tahuu qaba ture.
Oromon Kanaan Booda Akka Nafxanyaa Wajjin Hin Jiraane Dhiiga Haacaaluun Barreessine Murteefannee jirra. Karaa keenya nafxanyaa wajjin jiraachuun Dhumate! Karaa isaanii waan barbaadan murteefachuu danda’u. Biyyaa bahu, biyyaa haadha galuu. Biyyaa haadha malee biyya abbaa hin qaban. Kanaaf haadha himatu. Isaa akka deeman nu hin ilaalu.
Warri kun hidhatanii uummata keenya irratti waraana bananii jiru. Uummatni keenyaa karaa danda’uun fi waan of harkaa qabuun of irraa itisuun mirga isaa ti. Utuu diinni ilmaa kee ajjeessuu teesse ilaaluun Waaqa biratis tahee lafa irratti cubuu dha. Ajjeechaan ilmaan Oromoo dhaabbachuu qaba. Kadhaan hin dhaabbatu. Gaaffiin dhaabbatu. Kan dhaabbachuu danda’u yoo jabeesine diina keenya adda isaa keessa rukkutuu dandeenye qofa.
Diina qawwee hidhatee nutti dhufe harka qullaa adda keessa rukkutuun waan hin fakkaanne. Nuyis hidhachuu qabna. Hidhachuu malee hiikachuun salphina. Amma sana tooftaan falmanna. Waraana Wayyaanee amma funyaan isaa gahuu itti hidhatee ture Qarree fi Qeerroon Oromoo harka qullaa injifate. Garuu dhiiga guddaatu dhangala’e. Aarsaa sana fakkaatu baasuu hin qabnu. WBOn qawwee qabatee nu duuba jira. Amma sana bakka bakka laafa ishee dhawwuu qabna. Keessattu dingdeen ishee akka barbadaa’u godhuun ni danda’ama.
Bakka jirutti gurmoofnee jireenya keenya itti fufaa gufuu taanee ishee eegana. Gejabni hundi waraanan geggeessamuu hin danda’u. Kan qofaa deemu hunduu akeekkanaa keenya jala jira. Karaan Finfinnee geessu shanan cufamuu qaba. Qarree fi Qeerroon Oromoo utuu gumaa Haachaaluu hin deebifne akka gallee hin taanye kakuu galuu qabna.
Uummatni naanno keenya jiran Uummata Amharaa dabaltee sirna nafxanyaa of keessaa buqqisuu qabu. Hundi keenya erga akka Uummata Tigray nafxanyoota of keessa baafne kaane yoo barbaannee walitti dhufnee biyya walqixxumma fi dimookraasii(perfect union) qabu ijaarachuu kan nu dhowwu hin jiru. Kanaafuu dirqamni keenya inni duraa sirni nafxanyaa of keessa buqqisuu dha.
OPDOn Jiraachuuf Uummata Oromoo Wajjin Araaramuun Dirqama!
OPDOn Jiraachuuf Uummata Oromoo Wajjin Araaramuun Dirqama! Damee Boruu: Amajjii 06/2021 Amma bara 2018 waraanni…
NAFXANYAA HIN JEDHINAA? Taammanaa Bitimaa irraa: Sadaasa 20, 2020 "Nafxanyaa hin jedhinaa?", raajii dha! Egaa…